यसरी हुँदैछ मेसीको विवाह समारोह,समर्थककालागि पर्दामा देखाइने - Himalayan Kangaroo
यसरी हुँदैछ मेसीको विवाह समारोह,समर्थककालागि पर्दामा देखाइने
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ असार २०७४, बिहीबार ११:२८ |
एजेन्सी । विश्व प्रख्यात फुटबल खेलाडी लियोनल मेसीको विवाहको तयारी पूरा भएको छ। बालसखी एवम् प्रेमिका एन्तोनेला रोकुजोसँग जुन ३० मा उनी विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका छन्।
मेसी रोकुजोसँग ‘लिव इन रिलेसन’ मा थिए। उनले आफ्नो सम्बन्धको खुलासा सन् २००९ मा आएर गरेका थिए। मेसी र रोकुजोको दुई सन्तानहरु पनि छन्।
मेसी र रोकुजोको विवाहको तयारी लगभग सकिएको छ र उनिहरुको बिहेको तयारी यस्तो छ स्
कहाँ हुदैछ बिहे ?
अर्जेन्टिनाको रोसारियो शहरको सिटी सेन्टर कसिनो कम्प्लेक्समा मेसीको विवाह सम्पन्न हुँदैछ। विवाह समारोहका लागि २०० सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। जुन ३० का दिन कम्प्लेक्स सर्वसाधारणका निम्ति बन्द रहनेछ।
आफ्ना प्रसंशकका लागि विवाह समारोहबाहिर ठूलो पर्दा समेत लगाइने भएको छ जसले गर्दा उनका प्रसंशकहरुले टाढाबाटै उनीहरुको विवाह देख्नसक्नेछन्। उपस्थित पहुनाले फाइभ स्टार होटेलमा स्पाका साथै क्यासिनोको मज्जा लिन सक्नेछन्।
कस-कसको उपस्थिति रहनेछ ?
समारोहमा करिब ६०० जना पहुनाहरुको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ। मेसीले आफूले बोलाएका बार्साका २१ मध्ये सबैजनाको उपस्थिति रहने अपेक्षा राखेका छन्। नेयमार, सर्जियो बुस्केट्स, इभान राकिटिच लगायतका खेलाडीहरुलाई उनले निम्तो दिएका छन्। पूर्व समकक्षी जाभी पनि सो विवाहमा उपस्थित हुने बताइएको छ। यस्तै क्लबका चिकित्सक, मनोचिकित्सक र मसाजर र खेलाडीका लियाजो अफिसर पेपे कोस्टा पनि विवाहमा उपस्थित हुनेछन्।
अर्जेन्टिनाको टिभी स्टेशनमा केही दिनअघि मेसीको बिहेमा हुने परिकारको मेनु सार्वजनिक भएको थियो। खानाको परिकारहरुमा रोटी, सलादहरु देखि लिएर अर्जेन्टिनाका परिकारहरू इम्पान्दास, स्ट्रेक र क्यासेरोल छन्। त्यहाँ शुशीको छुट्टै स्टेशन पनि रहनेछ।
मेसीकी बेहुलीको पहिरन
२९ वर्षीय रोकुजो स्पेनिस डिजाइनर रोसा क्लाराले डिजाइन गरेको पहिरनमा देखिने अनुमान गरिएको छ। क्लाराले इभा लोंगोरिया, सोफिया भेरगारा, स्पेनकी रानी लेतिजाको पहिरन समेत डिजाइन गरेकी छिन्। साथै उनको विवाहमा २० जना हेयर डिजाइनर रहने बताइएको छ।
मेसीले विवाहमा कुनै पनि उपहार सामग्री नल्याउन अनुरोध गरेका छन्। यद्यपि उनले आफ्नो संस्था लियो मेसी फाउन्डेसनलाई उपहारको पैसा दिन अनुरोध गरेका छन्।
Previous३३४ मध्ये २२६ स्थानीय तहको मतगणना सुरु
Nextएक उपमहानगरिसहित ४ गाउँपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक,एमालेको अग्रता
२ बैशाख २०७४, शनिबार ०२:३३
११ श्रावण २०७४, बुधबार ०२:१४
११ श्रावण २०७३, मंगलवार १५:१६